Reiju Tokyo Beauty & Hikari Design Traning
Home About Us Design Beauty Gallery Stylish Ethno Students Contact
Foreign Design School
-Hollywood world beauty college. Fukuoka (Japan)
-Arimino Inc (Tokyo Japan)
Yukiko Kyi ရယူထားသော ဘွဲ့နှင့် ဒီပလိုများ
- Kiyoshi Technical School (Tokyo Japan) 1984
- Bico Beauty Salon (Atami Japan) 1987
- ISI, International Students Institute
(1987 - 1990 )
(Kokusai Gakuyu Kai)
- ODA Fashion Design College
(Tokyo Japan) 1991 - 1993
- Nakano Special Make Up, Cosmetic Culture
(Tokyo Japan) 1994
- Takigawa Esthetic School
(Tokyo Japan) Dip, 1999
- Japan Esthetic Association (Tokyo Japan) 1999
(London Institute of Aromatherapy) 2001
Yukiko Kyi နှင့်အတူ ဂျပန်နိုင်ငံမှ
ဘာသာရပ် ဆရာများဖြစ်သော ...
Kazuko Kurokawa (ZA'S group)
တို့သည် ဝါရင့် ဆရာ၊ ဆရာမ များဖြစ်ပါတယ်။
About Reiju Tokyo Beauty
Beauty Senmon co., Itd. ကို 1995 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီး အလှအပနှင့် သက်ဆိုင်သော သတင်းအချက်အလက်နှင့် ကုန်ပစ္စည်းများ ကို ထုတ်လုပ်ဖြန့်ချီခြင်းကို စတင်လုပ်ဆောင်ခဲ့ပါသည်။ ခုနှစ်ကတည်းက ဖွင့်လှစ်ခဲ့သော Fujiko Beauty Center ကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။
Fujiko Tsuneyoshi ဖြစ်သူကသမီးဖြစ်သူ Yukiko Kyi ကို Beauty နှင့် Fashion design ဘာသာများကိုလေ့လာစေခဲ့ပြီး ထိုပညာရပ်များကို မြန်မာအမျိုးသမီးစုအတွင်းသို့ ဖြန့်ဝေနိုင်စေရန် Reiju Tokyo Beauty ကို ၂၀၀၀ခုနှစ်တွင်၎င်း Hikan Fashion ကို၂၀၀၄ တွင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။
Reiju Tokyo Beauty ၏ဆောင်ပုဒ်မှာ “ရှင်သန်စိမ်းလန်းနေမည့် သစ်တစ်ပင်” ဖြစ်သည်။ မြန်မာ အမျိုးသမီးအားလုံးတွင်ရှိကြသော အလှအပနှင့် ဖန်တီးတီထွင်မှုများကို ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့် ကိုယ်တိုင် ဖော်ထုတ်နိုင်ရန် နိုင်ငံတကာဈေးကွက်တွင် နေရာယူနိုင်ရန် ရည်ရွယ် ပါသည်။
ဖက်ရှင်ဒီဇိုင်းပညာရပ်ဟာ မိမိတဦးတည်း တသီးပုဂ္ဂလရပ်တည်လို့မရ ပါဘူး။ သတင်းအချက် အလက်တွေ၊ နည်းပညာသစ်တွေကို အချိန်နှင့် တပြေးညီ သိထားဖို့လိုပါတယ်၊
Fashion Design Education Programme
စဉ်ဆက်မပြတ် ပညာပေးရေးအစီအစဉ်အရ ဒီသင်တန်းကျောင်းက ဆင်းသွားသော ကျောင်းသူများကိုကျောင်းနှင့် အဆက်အသွယ် ပြတ်မ သွားအောင် ဆက်သွယ်ထားမယ်။
Copyright © 2007. ReijuTokyoBeauty.com